Olee otú Iji Mee atụmatụ A Njem Iji Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Olee otú Iji Mee atụmatụ A Njem Iji Europe
Mgbe ị na-eme atụmatụ a njem Europe, ị na-eche ihu na ọtụtụ nhọrọ! Ebighebi ebe na ahụmahụ, na ị nwere ike ịga njem ruo ọtụtụ afọ ma ka na-eche na ị tufuru ihe dị mkpa. Nke a nwere ike iduga ịme ihe njehie njem nke imebiga ihe ókè, na efu si na nta nkọwa na-eme ka njem na ụgbọ okporo ígwè njem otú kpokọtara. Anyị na-ebe a na-agwa gị ihe ị na-ekwesịghị ime na otú ka atụmatụ a njem Europe, site ná mmalite ịrụcha!
NDỤMỌDỤ 1: Warara Ọ Down
Tupu ị nwere ike na-enweta ezigbo Spanish tapas, piazzas na Rome, ma ọ bụ Mbara ụlọ dị n'elu ụlọ na Prague, ihe dị mkpa bit nke admin a chọrọ! nanị tinye, ndị ọzọ na-akwadebe ị bụ mgbe ị na-eme atụmatụ a njem Europe, ka ukwuu, gị Ohere nke fun na a nchegbu-free njem na-adịgide ndụ ruo gị anya.
Ya mere, ebe a bụ a Zọpụta A Train n'ọnụ: họrọ a top ise, ga-dos maka na European njem! Ma eleghị anya, ọ na-aṅụ na Hofbrauhaus na Munich, ma ọ bụ na-ewere a kanaal tour na Amsterdam, ma ọ bụ n'inyocha David-ọtụtụ akụkụ – na Florence. Ihe ọ bụla, akara ndị ala na-eme atụmatụ gị na njem ha gburugburu. Mma site ụgbọ oloko.
Milan na Florence Ụgbọ oloko
Tiketi Prague ka Berlin Train tiketi
Frankfurt na Munich Train tiketi
NDỤMỌDỤ 2: Ekwela izere clichés.
Ugbu a ka anyị na-na na ike na ị chọrọ ka atụmatụ a njem Europe, esote na-ahọrọ gị n'elu ebe. Na mmụọ nke na YOLO, nwere ike ị chọrọ gaa amia track na ịchọ zoro ezo bara nnukwu uru n'ime obodo. Ma hipster na unu nke chọrọ aga megide mainstream ebe, nwere ike na-achọ ime a oche. On a njem nleta ụgbọ ala. E nwere ihe a mere n'ebe ndị dị ka The Colosseum, na eiffel tower, na Charles Bridge are all -ewu ewu nnọọ na njem nleta: ha na-na egwu! Echekwala na ị ga-enweta pụọ n'okporo ụzọ amia naanị maka ya. Ọ bụrụ na nnukwu nkiri ịrịọ gị, ahụ na-aga na-ahụ ha.
N'otu aka ahụ, adịghị emeso akwụkwọ ntuziaka dị ka gospel. Ọ pụrụ ikwu, sị na Louvre bụ onye zuru ga-eme na a njem Paris, but maybe you’d have a better day searching for Blek le Rat pieces on alley walls. mgbanwe, mgbe ị na-eme njem, bụ isi, mgbe!
London na Cologne Train tiketi
Tiketi maka London na Brussels Train
NDỤMỌDỤ 3: Travel dates are crucial when you plan a trip to Europe
Travel na anya kara. Popular ọnwa bụ July, August, na September. Ha na-insanely ọrụ n'aka, ghara ikwu ọnụ! Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ a njem Europe na Summer, ị ga-ekere òkè ọ bụla otu ahụmahụ na ọtụtụ nde na ọtụtụ nde ndị gị ezigbo enyi. Ulo ga-gbaa akwụkwọ si, ma ọ bụ oké ọnụ ma na Ụgbọ oloko ga-karị full, ebe obu na ha bụ ụzọ kasị mma na-eme njem!
NDỤMỌDỤ 4: Chịkọta akwụkwọ njem gị dị ka akụkụ nke atụmatụ njem Europe
Ọ bụrụ na ị na-adịghị a paspọtụ, mgbe ahụ ị kacha mma na-cracking! Ọ ga-ewe dịkarịa ala anọ izu isii site n'oge ngwa n'ihi na ị na-enweta otu. (Dabere na ihe mba i bi na nke N'ezie) Expedited ọrụ nwere ike adị n'elu usoro, ma ọ ga-eri gị. Ọ bụ ihe kacha mma na-elekọta nke a nke ọma tupu tupu gị na njem. Nwere a paspọtụ? Lelee ya ngafe ụbọchị! Ụfọdụ mba nwere ike agọnahụ gị ntinye ma ọ bụrụ na ọ expires n'ime 6 ọnwa nke mgbe ị na-abata. Eek!
NDỤMỌDỤ 5: Ịkwụ ụgwọ ụlọ a ụgbọ ala.
n'ịchọ ịgbazite ụgbọ ala mgbe ị na-eme atụmatụ a njem Europe? Jide n'aka na-nwere nti akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala. Ụfọdụ ụgbọ ala mgbazite ụlọ ọrụ na-achọkwa njem nwere mba ofesi akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala na mgbakwunye na ha akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala si obodo ha si.
Strasbourg na tiketi ụgbọ oloko na Paris
NDỤMỌDỤ 6: Ekwela n'elu-abịa gị njegasi na ọtụtụ ebe.
Dị ka e kwuru n'ihu, ọ dị mfe imebiga ihe ókè ma gbalịa ịpinye ya nke ukwuu. Ọ bụ kpam kpam ihe kwere nghọta. Your oké ọnụ ahịa ezumike kwesịrị ka a tinye n'ọrụ ọma, ya mere, ọ dị mfe iji na-agbalị n'elu-abịa gị itineraries mgbe na-eme atụmatụ a njem Europe. Otú ọ dị, nke a nwere ike ịdị ọnụ (ghara ikwu na-agwụ ike), dị ka n'elu-mbukota njem na ọtụtụ aga kwa ụbọchị ole na ole na-eduga ná ndị ọzọ oge na-aga, na ndị ọzọ gas ma ọ bụ gbaa ụgbọ okporo ígwè. Na oké ikpe, ọ nwere ike na sabotaji a njem, ọ ghọọ a blur nke hotel ego-ins na-elele-outs (na mgbe nile mbukota na unpacking), mgbe na-ekiri a mgbe-gara odida obodo mba gara aga ụgbọ okporo ígwè ahụ na windo. Ọ bụrụ na ọ kwe omume, jiri nwayọọ. ị zọpụta na njem ma nweta ihe oge inyocha gị ebe.
Brussels na tiketi Rotterdam Train
Antwerp na tiketi Rotterdam Train
Berlin na tiketi Rotterdam Train
Paris ka tiketi Rotterdam Train
NDỤMỌDỤ 7: ego Exchange
Njem n'efu a otutu ego ịzụta euro si ha akụ (ma ọ bụ njọ ma, si a mgbanwe ego counter) tupu o rutere na Europe. Nke a na-hefty ụgwọ! so don’t neglect this subject when you plan a trip to Europe.
Anyị ndụmọdụ bụ isi ozugbo na igwe ndọrọ ego mgbe ị na-abata na Europe na ịdọrọ ego na-eji gị igwe ndọrọ ego kaadị. Ọ bụ ihe dị mfe, na ọnụego mgbanwe na ị ga-esi maka azụmahịa bụ fọrọ nke nta N'ezie mma karịa ihe ọ bụla ọnụego anyị ọbụna nwetara n'ụlọ mmiri. Kpọọ gị akụ tupu ị na-ahapụ ka ịjụ banyere mba igwe ndọrọ ego azụmahịa ụgwọ, nakwa dị ka na-agwa ha na ị ga-eji gị kaadị ná mba ọzọ. Ọ bụrụ na ị naghị agwa ha, o nwere ike ime ka ha chee na ọ bụ aghụghọ, na ga-egbochi gị kaadị. Ọzọkwa, jụọ ma ọ bụrụ na gị akụ nwere mba ebe ma ọ bụ mmekọrịta na obodo mmiri na Europe.
Frankfurt na tiketi Cologne Train
Brussels na tiketi Cologne Train
Tiketi na Vienna na Cologne Train tiketi
Stuttgart na Cologne Train tiketi
NDỤMỌDỤ 8: Gịnị na ị hapụ na swings, i nweta na roundabouts
Elegharala ọnọdụ gị maka obere hotel ego. anyị nwere ike ikwu na-enye mmasị gị Airbnb ma ọ bụ hotel na kasị Central ebe mgbe ị na-eme atụmatụ a njem Europe. mmefu ego njem, ọ kachasị, nwere ọchịchọ họrọ a na nkwari akụ na a anya-tụpụ ebe ahụ bụ € 5 dị ọnụ ala karịa onye nke ahụ bụ ihe Central. ị ịzọpụta oge na ego na njem (karịsịa ma ọ bụrụ na ị na ifufe na-ewere tagzi ahụ nọ).
Zurich na Basel Train tiketi
Bern na tiketi Basel Basel
Geneva na tiketi Basel Train
NDỤMỌDỤ 9: Echefula ịkpọ onye na-ebu ekwentị gị tupu ị mee atụmatụ njem na Europe
Kpọọ gị ụgbọelu ozugbo ị zuru ezu ka atụmatụ a njem Europe ma na-a plan if ị na-eme atụmatụ iji ekwentị gị, na-eme ka ahụ n'aka na ị melite ekwentị gị iji zere mberede data ebubo (na nkenke: gbanyụọ cellular data na igbochi ọnụ ọgụgụ nke ngwa ọdịnala na nwere ike iji cellular data). na, dị ka a plan, arapara onwe Wi-Fi netwọk maka nbudata na-eziga ozi-, ịlele Weebụ, na iji ngwa ọdịnala. Europe nwere ọtụtụ wifi hotspots, otú ị ga-enwe nke aka maka ogologo. Nhọrọ, ịzụta a SIM kaadị maka ekwentị gị mgbe ị na-na Europe.
Rimini na tiketi ụgbọ oloko Milan
Rome na Florence Train tiketi
Turin na Milan Train tiketi
Venice na Milan Train tiketi
NDỤMỌDỤ 10: E nwere bụ An App N'ihi na Nke
Eightydays is an awesome travel app that can help you plan a trip to Europe while giving travelers an easy look into the options available when ejegharị ejegharị na Europe.
Ọrụ amalite site buru a obodo na-amalite na rụchaa na (maka ugbu a, ọ dị mkpa na-amalite ma na-akwụsị ndị njem na otu ebe). Wee họrọ ụbọchị ọpụpụ, ogologo oge njem ga-na ole ebe na-agụnye. Ọrụ nwekwara ike họrọ ma ọ bụrụ na ha chọrọ anya na obodo na Europe, European Union, ma ọ bụ naanị Mpaghara Schengen. The ngwa ga-ịmepụta otu njegasi, mezue na Airbnb udu ke bụla obodo, maka ndị na a mmefu ego.
Ọ bụ omume ịnọgide shuffling nhọrọ ruo mgbe ngwa na-akpọ ụkwụ n'elu njegasi na anya ọma. Na echegbula banyere-achọghị ka njem: The site says ya kpọmkwem ahịhịa si dị n'ebe ọdụ ụgbọelu and early morning departures that can drain travelers on the road.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe (ma) a zuru okè usoro maka ntinye akwụkwọ ihe dum European njem, Eightydays nwere ike inyere-enye njem a mma echiche nke price isi n'ihi na dị iche iche njem mgbe nwere ike na-ewebata ha na ebe ha nwere ike ọ gaghị na mbụ atụle.
Ndị njem nwere ike iji na Eightydays website or the newly launched iOS ngwa to plan their European voyages.
Lyon gaa London Train ugboro
Amsterdam ka Antwerp Train oge
Brussels ruo oge Frankfurt Train
Brussels na tiketi Mainz Train
N'ezie, ụzọ kasị mma njem bụ mgbe site Train! Zọpụta a Train bụ ụzọ kasị mma ịzụta gị tiketi. Ọ bụrụ na ị bụ banyere akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè pịa na njikọ https://www.saveatrain.com na-enweta oké ego.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fplan-trip-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / fr na / ma ọ bụ na / de na ndị ọzọ asụsụ.
#bucketlist #HowToGuideEurope europetravel longtrainjourneys ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Travel traveltips
5 Tụrụ Of Interest Ị na-amaghị Na South Africa